shankalay13: ကျနော့်သားက အတော်ဆုံး ?
အားလုံးကိုလှိုက်လဲစွာ ကြိုဆိုတယ်နော်။ စာတွေ၊ ကဗျာလေးတွေများပို့ ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ harkkhur@gmail.com ကိုပို့ ပေးနိုင်ပါတယ် ဗျာ။
မဆုတ်သာ မတိုးသာ အခြေအနေ..............
ကံလေးပါးလုံဖို့အရက်သောက်တာပါ..........
မောင့်လက် မှတ်လို့ ပါဆို......
အချစ်၏ လျှို့ ဝှက်ချက် ?
အချစ် = ချိုမြိန်ခြင်း
အချစ် = နာကျင်ခြင်း
သစ်ပင်၊ သစ်ရွက် နဲ့လေပြေ
ကျနော့်သားက အတော်ဆုံး ?
စာမေးပွဲရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ လေ
TAI LENG TAI
The Tai Zones
Burmese football team in Sydney, Australia, Photoslideshow
My Small World ^_^
Kholun - ခေါဟ်လံင်ဖါသိုင့် အင်းဟှးလင် - Eastern Burma
အကြည်တော် နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ
ကျနော် သွားကြည့်တဲ့ ကာတွန်းတွေ
ကျနော် သွားကြည့်တဲ့ သိုင်းကားတွေလေ
ကျနော် ကြိုက်တဲ့ မြန်မာ ဂစ်တာစာအုပ် နေရာလေးတွေပေါ့
သာယာသော နေ့ တစ်နေ့ ၌ လူ ၄ ယောက်သည် golf ကစားရန်ထွက်သွားကြသည်။ ပထမတစ်ယောက်က ကိစ္စရှင်းနေသဖြင့် ကျန်သုံးယောက်သည် ကစားကွင်းသို့ သွားရင်း ၄င်းတို့ ၏သားများ အကြောင်းပြောနေကြ၏။
ပထမ။ ။ ကျနော့်သားက အခုတစ်လော အိမ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာ တော်တော်လေးနာမည် ရလာတယ်ဗျ။ သူက လက်သမား အဖြစ်နဲ့စတာလေ။ အခုတော့ ကိုယ်ပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ရှိနေပြီ။ အရင်နှစ်ကတောင် သူ့သူငယ်ချင်းကို အိမ်တစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်ဗျ။
ဒုတိယ။ ။ ကျနော့်သားကလဲ တော်တော်လေးကို တော်တယ်ဗျ။ ကားရောင်းတာကနေစတာ အခုဆိုရင် ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ ကိုတောင်ဦးဆောင်နေပြီဗျာ။ သူလဲ လွန်ခဲ့တဲ့6လတုန်းက သူ့ သူငယ်ချင်းကို ကားအသစ်စက်စက် နှစ်စီးပေးလိုက်သေးတယ်။
တတိယ။ ။ ကျနော့်သားက ရှယ်(လ်)ယာ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာလေ။ ခုတော့တော်တော်လေးကို အောင်မြင်နေပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်ကတောင် သူ့သူငယ်ချင်းကို ရှယ်(လ်)ယာ အကြီးကြီး လက်ဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်။
၄င်းတို့ စကားပြောနေစဉ်တွင် စတုတ္ထတစ်ယောက်ပြန်လာသဖြင့် ကျန်သူများက ၄င်းတို့ က သူတို့ ၏သားများ အကြောင်းပြောနေ ကြကြောင်းနှင့် စတုတ္ထတစ်ယောက်၏ သားအကြောင်းမေးမြန်းကြ၏။
စတုတ္ထ။ ။ ကျနော် အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော့်သားကြောင့် ကျနော် တော်တော်လေးကို စိတ်မချမ်းသာပါဘူးဗျာ။ 15 နှစ်လုံး လုံး ကျနော့်သားက ဆံပင်ညှပ်နေတယ်လေ။ သိပ်မကြာခင်ကမှ သူ gay ဖြစ်ကြောင်းကျနော် စုံစမ်းလို့ သိရတာဗျ။ အကောင်းဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်တော်တော်လေးကို တော်တယ်လို့ ပြောရမယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ ရည်းစားသုံးယောက်က အိမ်တစ်လုံး၊ ကားအသစ်စက်စက် နှစ်စီး နဲ့ရှယ်(လ်)ယာ ကြီးကြီးကို လက်ဆောင်ပေးထားတယ်လေ။ တဲ့
ရှမ်းကလေး (ဤဟာသအား ပို့ ပေးသော သူငယ်ချင်းအား အထူးကျေးဇူးတင်လျက်)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:40 AM
Font: Tai/Shan Font
Font: Burmese Font
Keng Tong's water festival
စာဖတ်ပရိတ်သတ်တို့ ၏ ရင်ဖွင့်သံ